Miorina amin'ny cookies no hiatrehanao ny hafa amin'ny Cookie Wars | Androidsis
Cookie Wars dia aseho ho karazana fiarovana tilikambo lafiny miaraka amina hetsika marobe sy biby fiompy biby fiompy iray manontolo izay tsy maintsy arakaranao. Lalao iray izay tsy maintsy ampiasanao cookies isan-karazany amin'ny loko sy endrika rehetra hanoherana ireo Jelly Walkers izay naka ny Cookie World.
Kilalao tena matsiro izay mametraka antsika alohan'ny mekanika lalao fantatry ny hafa, na dia eo aza ny famporisihan'ireo biby fiompy ireo karazana sy tsiro rehetra. Cookie Wars dia tonga ao amin'ny Play Store hanolotra ny tenany ho lalao ahafahanao mandany ora maro hanatsarana ny miaramila.
1 Cookies maro ao amin'ny Cookie Wars
2 Miatrika mpilalao hafa
3 Fomba maro isan-karazany ankafizinao
Cookies maro ao amin'ny Cookie Wars
Ny rafitra lalao ao amin'ny Cookie Wars dia tena tsotra, satria ny iraka ataonao dia manaparitaka singa samihafa hanafika ny sefo fahavalo rehefa miaro ny anao amin'ireo mpiadiny. Mekanika lalao efa be mpampiasa amin'ny finday ary miverina amin'ny fanomezana azy io amin'ny cookies marobe mamy.
Ny iray amin'ireo tanjaky ny Cookie Wars dia ny karazana biby fiompy / mpiady izay hanananao amin'ny herinao ary mila miakatra ianao mba hahafahanao mametraka ny tafika mpiady lehibe indrindra amin'ny fahavalo. Mba hanaovana izany dia hanokatra singa vaovao ianao rehefa mandeha amin'ny ambaratonga. Ary izany ve amin'ity lalao freemium ity Ho hitanao io sarintany io miaraka amin'ireo ambaratonga marobe izay tokony hofenoinao kintana 3 hahafa-po anao.
Noho izany dia tsy maintsy mandeha manangona harena sarobidy sy donuts feno kaloria sy siramamy betsaka isika. Ohatrinona fahefana lehibe kokoa manana ny cookiesNy tsara kokoa dia avelanao hijoro hahatratra tontolo hafa ary hahita fahavalon'ny fahasahiranana lehibe kokoa. Amin'ny voalohany dia ho mora be ny haavony ary tsy hanahirana be izany. Teboka iray saika manery antsika hanohy hilalao hiatrika tetika fanafihana hafa ataon'ny fahavalo.
Miatrika mpilalao hafa
Ary ankoatry ny PVE (Player mifanohitra amin'ny tontolo iainana), dia misy ny fifandonana amin'ireo mpilalao hafa, izay dia iray amin'ireo lafiny tsara indrindra amin'ny Adin'ny Cookie. Toa an'i Clash Royale, ny PvP dia mitondra antsika any amin'ny taranja hafa sy ny lalao mandrangitra kokoa, satria amin'ny fotoana tena izy ny fifandonana. Mahatonga antsika any amin'ny teboka hafa izany, satria lehibe kokoa ny fanamby alohan'ny mpilalao iray hafa izay hitady fomba hikapohana antsika amin'ny fotoana fohy indrindra.
Tonga koa ny valisoa tsara kokoa raha miakatra ambaratonga isika ary miatrika karazana mpilalao hafa isika, na dia izany aza dia mila fotoana bebe kokoa isika. Na izany na tsy izany, io dia iray amin'ireo teboka faniry indrindra amin'ny Cookie Wars izay azontsika atrehana mpilalao hafa.
Ny mekanika dia Clash Royale miaraka aminy tilikambo roa manohana alohan'ny hahatongavany amin'ny famaranana. Amin'ireo lalao roa lalaovina amin'ny hafa dia nahazo fandresena isika, ka tsy maintsy jerentsika izay alehan'ny Cookie Wars ao amin'ny PvP, satria io no iray amin'ireo tanjany voalohany. Na dia mazava ho azy aza, manana tantara iray harahina miaraka amin'ireo ambaratonga rehetra ireo koa isika raha tsy te-hiatrika ny hafa.
Fomba maro isan-karazany ankafizinao
Ny iray hafa manasongadina ny Cookie Wars dia ny isan-karazany ny maody ny lalao. Izany hoe, ankoatry ny voalaza rehetra, afaka mandeha any amin'ny faritra manokana toy ny lapa misy ranomandry isika, izay hiatrehantsika andiana fahavalo izay hanandrana hanao zavatra sarotra be ho antsika. Hanana fanandramana efatra izahay alohan'ny hiandrasana fotoana fohy hiverenana ao amin'ny trano mimanda.
Amin'izany no ilazantsika fa ny Cookie Wars dia manome karazana ampy betsaka mba tsy ho leo amin'ny zavatra mitovy foana isika. Amin'ny lafiny teknika dia fifaliana ihany koa izany ary manondro fomba tena tsara mba ho iray amin'ireo lohateny tokony horaisina amin'ity taona ity. Freemium izany, ka fantatrao izay toherinao. Ho an'ny ambiny, lalao efa nomanina tena tsara miaraka amin'ny sary avo lenta toy ny famolavolana ny endri-tsoratra.
Cookie Wars dia lalao misy cookies maro, miaraka amina PvP be dia be sy tantara iray harahina hahafantarana ireo singa sariaka be dia be izay manana ny fahaizany manokana. Anjaranao ny mahalala ny fomba fampidirana azy ireo handalo ny lalao iray manontolo.
Famolavolana sary mahafinaritra
Fomba lalao isan-karazany
Ny zavatra fiarovana ny tilikambo dia hita ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Fangaro amalona iray amin'ny cookies no miandry anao ao amin'ny Cookie Wars hiatrika mpilalao hafa
Ny vidin'ny Sony Xperia XZ3 dia naseho tany Eropa